IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI: “Ka ịlụ di na nwunye bụrụ ihe a na-asọpụrụ n’etiti unu niile. Ka ihe ndina unu bụrụkwa ihe a dịghị emerụ emerụ: n’ihi na Chineke ga-ekpe ndị na-akwa iko ikpe, ha na ndị na-akwa iko, bụ́ ndị ikom nwere nwunye na ndị inyom nwere di.”—Ndị Hibru 13:4, Bible Nsọ nke Union Version.
AJỤJỤ: Okpukpe a ọ̀ na-agwa ndị òtù ya ka nwoke na nwaanyị bikọ ọnụ gaa gbaa akwụkwọ otú iwu kwuru?
IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI: Mgbe a jụrụ Jizọs ma è nwere ihe ga-eme ka di na nwunye gbaa alụkwaghịm, o kwuru, sị: “Onye ọbụla gbara nwunye ya alụkwaghịm, na-abụghị n’ihi ịgba akwụna, lụrụ nwunye ọzọ, na-akwa iko.”—Matiu 19:9, Baịbụl Nsọ Nhazi Katọlik.
AJỤJỤ: Okpukpe a ọ̀ na-akwanyere iwu a Jizọs nyere ùgwù, kwere ka ọ bụrụ naanị ịkwa iko ga-eme ka ndị òtù ya na-agba alụkwaghịm ma na-alụgharị di ma ọ bụ nwunye?
IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI: “Gbaaranụ mmehie ịkwa iko ọsọ. Ọ dịghị mmehie ọzọ na-emekụta anụ ahụ mmadụ dị ka mmehie ịkwa iko. Ọ bụ mmehie mmadụ na-eme megide anụ ahụ ya.”—1 Ndị Kọrịnt 6:18, Baịbụlụ Nsọ nke International Bible Society.
AJỤJỤ: Okpukpe a ọ̀ na-akụzi na nwoke na nwaanyị na-abụghị di na nwunye inwe mmekọahụ bụ mmehie? Ọ̀ na-akụzikwa na nwoke na nwoke ma ọ bụ nwaanyị na nwaanyị inwe mmekọahụ bụ mmehie?
IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI: “Ka unu na onye ọ bụla nke a na-akpọ ya aha na ọ bụ nwanna ghara imekọ ihe, ma ọ bụrụ na onye ahụ bụ onye na-akwa iko, ma ọ bụ onye anyaukwu, ma ọ bụ onye na-ekpere arụsị, ma ọ bụ onye nkwutọ, ma ọ bụ onye na-aṅụbiga mmanya ókè, ma ọ bụ onye na-apụnara mmadụ ihe; ka unu na onye dị otú a ghara ọbụna irikọ ihe.” (1 Ndị Kọrịnt 5:11, Bible Nsọ nke Union Version) Olee ihe e kwesịrị ime ndị kpọrọ onwe ha Ndị Kraịst na-eme mmehie ma jụ ichegharị? Okwu Chineke kwuru, sị: “Sitenụ n’etiti unu wepụ nwoke a.”—1 Ndị Kọrịnt 5:13, Baịbụlụ Nsọ nke International Bible Society.
AJỤJỤ: Okpukpe a ọ̀ na-achụpụ onye òtù ya ọ bụla na-emebi iwu Baịbụl ma jụ ichegharị?
[Ihe odide gbatụrụ okpotokpo nke dị na peeji nke 6]
Olee okpukpe a maara na-akpa àgwà ọma Baịbụl kwuru ka a na-akpa?
Gụọ ihe Baịbụl kwuru banyere egwuregwu iberiibe na mmadụ inwe mmekọahụ tupu ọ lụọ di ma ọ bụ nwunye.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ezi Okpukpe Na-akụziri Ndị Òtù Ya Ịkpa Ezi Àgwà